Mayelana NATHI | IHuai'an Zhili Pipe Industry Technology Co., Ltd.
IHuai'an Zhili Pipe Industry Technology Co., Ltd.
uchwepheshe owenza ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza,
ukuthengisa njengomunye wabakhiqizi bamapayipi amahle kakhulu,
ibhizinisi lisebenzisa uphawu "lodokotela ipayipi",
ipayipi elikhulu lekhava ephezulu ye-PPR, ipayipi lokushisa phansi le-PERT, ipayipi lokuhambisa amanzi le-pvc-u, ikesi kagesi nolunye uchungechunge oluphelele nemikhiqizo esekelayo.
Le nkampani ibizinikele ekucwaningeni ukufakwa kwamapayipi kanye nezikhunta ezahlukahlukene zepulasitiki iminyaka eminingi, igcina njalo ijubane nobuchwepheshe bamazwe omhlaba, obuphambili, ukuphathwa kobungcweti kudale ikhwalithi enhle kakhulu nomkhiqizo omuhle kakhulu. Ukwethulwa okuqhubekayo kwemikhiqizo emisha yabathengi ukuletha ukukhetha okucebile. IHuai'an Zhili Pipe Industry Technology Co., Ltd.
Ipayipi likaDkt Guan lisungule isikhungo selabhorethri yocwaningo lwesayensi nezobuchwepheshe, lafaka amapayipi amaningi namapayipi wokukhiqiza othomathikhi, imishini yokukhiqiza ikhompiyutha kanye nemishini yokukhiqiza amapayipi, imishini eminingi yokubumba umjovo womshini wokuzivocavoca kanye nezinye izinsiza zokukhiqiza amapayipi. Ngasikhathi sinye, abathuthukisi bamapayipi abakhokha kakhulu bayaqashwa, bathembele eminyakeni yokujwayela amasu okwenza amapayipi, ngosizo lweplatifomu ebanzi ye-R & D, futhi besebenzisa imishini ephelele yokuhlola ukwenza ingcindezi nokucindezela kokuqina kokuqina eqenjini ngalinye lemikhiqizo, futhi sizibophezele ekuthuthukiseni nasekuthuthukiseni amapayipi. Letha amapayipi anempilo, aphephile futhi alungele imvelo kubathengi, nikela ngekhwalithi kubasebenzisi, futhi ulethe wonke amapayipi agcwele ifilosofi yezempilo kuyo yonke imindeni ejabule.
Le nkampani inesikhungo sokuhlola sobungcweti, amazwe angenisa ipayipi lokucindezela umhloli, umhloli wokulahla isando, i-Vicat ukuthambisa umhloli neminye imishini yokuhlola, futhi isebenzisa yonke inqubo yokulawulwa kwekhwalithi kusuka kusitoreji sezinto ezingavuthiwe kuye ekukhishweni okuphelile komkhiqizo.
Amapayipi wokusebenzela afanelekayo wokukhiqiza
Ukwenza umkhiqizo, kufanele siqale senze ikhwalithi
Amasiko angukuhlangana kwebhizinisi
Bheka ukuphumelela kohlobo lwamapayipi njengokulungele ukulawulwa kwamapayipi obudokotela, gqugquzela ukwakhiwa komgwaqo womkhiqizo ngamasiko awo, futhi unqume umqondo wentuthuko "wokubeka uphawu kumele kuqala ube yikhwalithi".
UDkt Guan Pipe ukholelwa ngokuqinile ukuthi ukukhiqizwa kochwepheshe kuphela okungathola imikhiqizo ephephile, ukubuyekezwa kochwepheshe kuphela okungashintshanisa ukwethenjwa kwabasebenzisi, futhi izinsizakalo zobuchwepheshe kuphela ezingadala inani lomkhiqizo elengeziwe, ngakho-ke siyazi ukuthi uphawu lokuchwepheshe kuphela olungenza ukuthi sihambe. buqamama.
Ukuqala ezimfanelweni, sisebenzisa isiko ukuhlakulela imikhuba yokuziphatha kwabasebenzi, futhi sisebenzisa isiko likaDkt Guan ukukhuthaza ubuhlakani babasebenzi, futhi ekugcineni sakhe isiko lenkampani elingelikaDkt Guan kanye nesiko lokusebenzisana likaDkt Guan .
"Ukuhlangabezana nezidingo zakho ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nangensizakalo ecabangelayo" kungumgomo wenkonzo yamaphayiphi kaDkt Guan. Ngezidingo zamakhasimende njengomgogodla nokuholwa, yakha uhlelo lwesevisi yamakhasimende nezindlela zensizakalo ezihlangabezana nezidingo zomsebenzisi, futhi wakhe ithimba lenkonzo yamakhasimende ngokwaneliseka komsebenzisi njengenhloso yesevisi. Uhlelo lokuhlinzekwa kwamakhasimende lomkhiqizo we- "Doctor Guan Pipeline" lulandela indinganiso efanayo yokuphathwa kwezinsizakalo futhi luhlinzeka ngezinsizakalo ngamazinga wekhwalithi afanayo kubasebenzisi ezweni lonke.
Sekela ngokuphelele futhi usebenzise "umthetho wekhwalithi yomkhiqizo" kazwelonke kanye "nomthetho wokuvikelwa kwamalungelo abathengi." Ukuqaliswa okugcwele kwesitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9001-2008 kanye ne-ISO14001 yokukhiqizwa kwesitifiketi sohlelo lokuphathwa kwezinga elijwayelekile; ukwakheka komkhiqizo, i-R & D, nokukhiqizwa kuhlose ukufunwa yimakethe, kugxile ekuvikelweni kwemvelo, ubuchwepheshe, ubuntu, imfashini namasiko womkhiqizo.
Ukuze kuqinisekiswe izidingo eziphelele zabasebenzisi, uDkt Guan Pipeline ubuye akunikeze nezinsizakalo "ezisezingeni eliphakeme, ezisebenza kahle, ezisheshayo, nezinembile", futhi ngenhliziyo yonke unikeza amakhasimende ukwesekwa kwezobuchwepheshe okucabangayo nokucabangayo.
Ukubonisana kwezobuchwepheshe: amapharamitha wokuklanywa kwemikhiqizo, amagama asetshenzisiwe, ukusebenza komkhiqizo kanye nezixazululo zolwazi oluhlobene zamapayipi nokufakwa; ukufakwa komkhiqizo.
Isiqondiso sokwakha: Ngenqubekela phambili ebushelelezi yokwakhiwa, uDkt Guan Pipeline angathumela izisebenzi zobunjiniyela nezobuchwepheshe esizeni sokwakha ukuqondisa ukwakhiwa nokufakwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ukuxoxisana ngokubhida: Uma kukhona ukubhida ngephrojekthi, uDkt Guan Pipeline anganikeza abasebenzi abaqeqeshiwe nabezobuchwepheshe ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezigcwele zamakhasimende.
Isabelomali sezinto ezibonakalayo: Ngokuya ngezidingo zemidwebo, uDkt. Guan Pipeline uqasha ochwepheshe ukwenza ibhajethi izinto zokwenzela amaklayenti.